Faah Faahino kasoo baxaya dadkii Ciidamada AMISOM ku laayeen Deegaanka Lafoole - Hablaha Media Network
Faah Faahino kasoo baxaya dadkii Ciidamada AMISOM ku laayeen Deegaanka Lafoole
HMN:- Ciidano katirsan kuwa nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM ayaa barqonimadii maanta weerar isugu jiray qarax miino iyo mid toos ah kala kulmay dabley hubeesan oo la tuhmayo in Al Shabaab yihiin.
Weerarka ayaa ku bilowday qarax miino oo wadada dhinaceeda la dhigay, waxaana xiligaasi kadib ciidamada AMISOM iyo dableyda hubeesan halkaasi ku dhax maray iska hor imaad daqiiqado socday.
Ciidamada AMISOM ayaa afarta jiho rasaas xoogan u furay, waxa ayna markii dambe ciidamada galeen xaafado katirsan deegaanka Lafoole halkaas ay ku laayeen dad rayid ah.
Dadka deegaanka ayaa ku waramayay in Ciidamada AMISOM ay dileen dad ka badan 10-qof oo shacab ah ay ku jiraan caruur iskuul dhiganeysay, waxaa sidoo kale dadka ay Ciidamada AMISOM dileen ku jira nin Wariye ahaa.
Ciidamo badan oo gurmad ah kana tirsan AMISOM ayaa gaaray deegaanka Lafoole, waxaana weerarka lala beegsaday AMISOM oo dhankooda la sheegay in uu khasaaro kasoo gaaray.
Isku socodka dadka iyo gaadiidka Degmada Afgooye iyo magaalada Muqdisho ayaa mudo saacado ah xirnaa, waxaana saameyn badan ku yeeshay weerarka ka dhacay Deegaanka Lafoole.
Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Dowlada Federaalka iyo Taliska AMISOM ayaan wali war rasmi ah kasoo saarin weerarka ka dhacay Deegaanka Lafoole iyo dadka shacabka ah ay laayeen Ciidamada AMISOM.